रेखा थापाको कडा ‘योग आशान’ ! – Jagaran Nepal
रेखा थापाको कडा ‘योग आशान’ !
Jagaran Nepal बुधबार, आषाढ २४, २०७७
कोरोना भाइरसका कारण मानिसहरुको दैनिकिमा परिवर्तन आएको छ । योगाा, ध्यान लगायतका कुरामा मानिसहरुले ध्यान दिइरहेका छन् । लकडाउन र कोरोनाका प्रभावका कारण जनजीवन सामान्य बन्न सकेको छैन । त्यसमा पनि फिल्महरु सञ्चालन नहुँदा कलाकारहरु फुर्सदिला भएका छन् ।
नयाँ चलचित्रहरु बन्न सकेका छैनन् भने बनेका चलचित्र पनि हलमा जान पाएका छैनन् । यसबीचमा कलाकारहरुको दैनिकी प्राय घरमै वित्ने गरेको पाइएको छ ।
कुनै बेलाकी चल्तीकी अभिनेत्री तथा निर्माती रेखा थापा यतिबेला शरीर फिट राख्न व्यस्त बनेकी छिन् । उनले फिटनेश प्रशिक्षकसँगका तस्वीर र आफूले गरेको व्यायामको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पनि शेयर गरिरहेकी हुन्छिन् ।
यसैक्रममा उनको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । उनी आफ्नै निवासमा योग गरिरहेकी छन् । फिटनेस ट्रेनर विजु पार्कीसँग उनले योग सिकिरहेकी छन् । पार्कीले आजै सामाजिक सञ्जालमा उक्त तस्वीर राखेका छन् ।
बुधबार रेखाले ट्रेनर विजु पार्कीसँगको २ तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेकी थिइन् । शरीर ब्यालेन्स गर्ने आसनमा विजुले रेखाको आडमा शरीरलाई हावामा ब्यालेन्स गरेका छन् ।
रेखाको उक्त तस्वीर शेयर गर्दै ब्यालेन्स नै सबै कुराको कुञ्जी भएको लेखेकी छन् । उनले लेखेकी छन्, ब्यालेन्स नै सबै कुराको कुञ्जी हो । हामीले केही गर्दा, सोच्दा, बोल्दा, खाँदा वा फिल गर्दा पनि ब्यालेन्स हुन जरुरी रहन्छ । यसैले हामीलाई माथि पुर्‍याउनेछ । स्वस्थ्य रहनुस्, सकरात्मक रहनुस् ।